Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Ka Qoreen Wargeysyada Yurub. | Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Ka Qoreen Wargeysyada Yurub.
Waxaa qoray: Balaleti 17-January-2012	30 fekradood
Maalin wanaagsan akhristayaasheena qiimaha iyo qaayaha leh meel kasta oo aad dunida ka joogto waa mar kale iyo barnaamijkeenii Wargeysyada Yurub Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda oo aad maalin walba inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kala socotaan shabakada ciyaaraha laacib.net.
Barnaamijkaan waxaan ku soo qaadanaa wararka xanta ah ee ay wargeysyada ugu waa weyn qaarada yurub ay ka qoraan suuqa kala iibsiga, wararka ku qoran halkaan waxaa xuquuqdooda iska leh wargeysyada ku qoran.
Kooxda Arsenal ayaa dooneysa inay la saxiixato shan jirka uu dhalay Robin van Persie Shaqueel, waxaana Wenger oo inta badan ciyaartoyda soo saara uu u arkaa mid mustaqbal leh isagoo labo jeer oo hore tababar ku sameeyay 5 jirkaan Arsenal, waxaana ay arintan qeyb ka tahay siyaasada ay Gunners ku dooneyso inay ku sii ceshato kabtankooda Robin van Persie. Sidaasi waxaa daabacday Daily Mail.
Chelsea ayaa ku dhow inay heshiis kula soo wareegto laacibka kooxda Lille Eden Hazard, ka dib markii Real Madrid ay dib u soo cusbooneysiisay xiisaheeda ciyaaryahanka. Wakiilka Hazard ayaa filanaya in dalab 25 milyan oo ginni uu ka yimaado Stamford Bridge, waxaana warar ka soo baxaya Lille ay xusayaan in Lille ay heshiis hordhac ah ka ogolaatay Chelsea. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Kooxda Faransiiska Paris St Germain ayaa la rumeysan yahay inay 25 milyan ginni ku dalbadeen 27 jirka weerarka uga ciyaara Manchester City Carlos Tevez, ka dib markii City ay iska diiday dalab 21 milyan ginni ahaa oo uga yimid kooxda Inter Milan. Sidaasi waxaa qortay jariirada Daily Star.
Tottenham ayaa dul dhigtay weeraryahankeeda 29 jirka ah Jermain Defoe 20 milyan oo ginni, ka dib markii la sheegay in Liverpool ay ku dalbaneyso 10 milyan ginni. Sidaasi waxaa qortay Daily Mirror.
Weeraryahanka Manchester United Dimitar Berbatov ayaa dhexda uga jira dagaal u dhaxeeya Jarmalka iyo Russia. 30 jirkaan ayaa waxaa doonaya kooxaha CSKA Moscow, Anzhi Makhachkala, Bayern Munich iyo mid ka mid ah kooxihiisii hore Bayer Leverkusn. Sidaasi waxaa qortay Manchester Evening News.
Dhinaca kale kooxda Man United ayaa dagaal waji ka waji ah waxa ay la geli doontaan kooxda Serie A ka dhisan ee Juventus oo ku aadan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee 19 jirka kooxda Basel Granit Xhaka. Sidaasi waxaa qortay talkSport.
Lokomotiv Moscow ayaa isku dayaysa inay Arsenal ka dulqaado weeraryahanka kooxda Cologne Lukas Podolska, iyagoo 26 jirkaan ku dalbaday 20 milyan ginni, lakiin dalabkoodaan waxa uu ku aadan yahay kaliya xagaaga. Sidaasi waxaa daabacday Metro
Weeraryahanka kooxda Marseille Loic Remy oo 25 jir ah ayaa iska diiday inuu bishaan Janaayo u dhaqaaqo kooxda Tottenham. Sidaasi waxaa qortay The Sun.
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay horumar ka sameyneyso saxiixa weeraryahanka kooxda Swansea City Scott Sinclair, 22 jirkan ayaa lagu qiimeeyaa 5 milyan ginni. Sidaasi waxaa daabacday jariirada Daily Star.
Tababaraha cusub ee kooxda QPR Mark Hughes ayaa doonaya inuu dalbado weeraryahanka kooxda Fulham Bobby Zamora. Sidaasi waxaa lagu daabacay London Evening Standard.
Kooxda Liverpool ayaa kooxo badan oo Europe ah ka hoos xaday 14 jirka weerarka uga ciyaara kooxda reer Sweden IFK Norrkoping ka Adul Aziz ka dib markii ay ku marti qaadeen todobaad tijaabo ah oo uu kooxda tababar la qaadanayo. Sidaasi waxaa qortay talkSport.
Tottenham ayaa laga yaabaa inay dib u sii cusbooneysiiso xiisaheeda ku aadan weeraryahanka Athletic Bilbao Fernando Llorente, 26 jirkaasi ayaa waxaa lagu qiimeeyaa 24 milyan ginni. Sidaasi waxaa lagu daabacay shabakada Footybunker.
Ravel Morrison ayaa waxa ay isku horimaanayaan tababarihiisa Sir Alex Ferguson, ka dib markii ciyaaryahanka khadka dhexe ee Man United uu beeniyay inuu diiday inuu heshiis cusub u saxiixo Red Devils taasoo uu hore u sheegay Sir Alex. Sidaasi waxaa qortay The Times.
Chelsea iyo Liverpool ayaa doonaya burburiyaha khadka dhexe ee kooxda Partizan Belgrade Medo Kamara. Kamara oo 24 jir ah kana soo jeeda Sierra Leone islamarkaana heysta baasaboorka Finland ayaa waxa uu u janjeeraa dhanka Chelsea, iyadoo tababarihii hore ee kooxda Blues Avram Grant uu madax ka noqday kooxda Partizan Belgrade. Sidaasi waxaa qortay The Sun.
Liverpool ayaa diirada saareysa inay xagaaga soo socda la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Swansea City Joe Allen, ka dib qaab ciyaareedkiisa wanaagsan ee xilli ciyaareedkan. Sidaasi waxaa daabacday The Independent.
Ciyaaryahanka ka dhacay kooxda Arsenal Sebastien Squillaci ayaa waxa uu diirada u saaran yahay kooxda Monaco. Daafaca dhexe ee dalka Faransiiska ayaan in badan fursad helin xilli ciyaareedkan inkastoo dhaawacyo ay hareeyeen. Sidaasi waxaa daabacday Daily Mirror.
Ciyaaryahanka kooxda FC Porto Fredy Guran ayaa ah ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee khadka dhexe ee lala xiriiriyo inuu bishaan Janaayo u wareegayo kooxda Juventus. Kooxda Marwada Duqda ah ayaa waxa ay raadineysaa ciyaaryahan ay ku xoojiyaan khadkooda dhexe. Ciyaaryahanka kooxda Fiorentina Valon Behrami iyo kan Sampdoria Angelo Palombo ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa Bianconeri. Sidaasi waxaa qortay Football Italai.
Kooxda Juventus ayaa si rasmi ah uga iibisay ciyaaryahankooda da’da yar Yago Falque Silva kooxda Tottenham, oo iyadaan durbadiiba amaah ku sii siisay kooxda Southampton. Sidaasi waxaa qortay Tuttosport.
Ciyaaryahan Marco Materazzi ayaa sheegay inuu sameyn lahaa soo iibsi la yaab leh, hadii uu madax ka ahaan lahaa kooxda Inter Milan, isagoo sheegay inuu soo xero gelin lahaa weeraryahanka kooxda AC Milan Alexandre Pato. Sidaasi waxaa qortay Football Italia.
Ciyaaryahanka kooxda Juventus ka dhacay ee weerarka ka ciyaara Amauri ayaa u dhow inuu ku biiro kooxda Fiorentina oo beryahan xiiseynaysay laacibkan, sidoo kale kooxda Roma ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso. Sidaasi waxaa qortay La Gazzetta dello Sport.
Kooxda AS Roma ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto kabtankeeda mustaqbalka ciyaaryahan Daniele De Rossi, oo qandaraaskiisa uu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedkan. Sidaasi waxaa qortay Tuttosport.
Madaxweynaha kooxda Barcelona Sandro Rossel ayaan meesha ka saarin in kooxdiisa ay la soo wareegi doonto Neymar mustaqbalka, isagoo sheegay inay suurtogal tahay inay la soo wareegaan 2014ka marka uu qandaraaskiisa Santos u dhamaado. Sidaasi waxaa qortay Marca.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa marka laga soot ago dagaalka ay ugu jiraan saxiixa Neymar waxa ay haatan sidoo kale waji ka waji isaga horimaan doonaan soo xerogleinta 19 jirka kubadsameeyaha kooxda Sao Paolo Lucas Rodrigues Moura. Sidaasi waxaa daabacday Sport.es
La Wadaag Maqaalkaan Asxaabtaada:FacebookTwitterGooglePinterestTumblrFekradaada Facebook Ku Dhiibo Ama Qeybta Hoose Ee Fekradaha: Fekradood ayaa laga bixiyay.	2012-01-17